Guatemala sy El Salvador no iharan'ny horohoron-tany mafy
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any El Salvador » Guatemala sy El Salvador no iharan'ny horohoron-tany mafy
Nisy horohoron-tany lehibe namely ny morontsirak'i Goatemalà tamin'ny alakamisy, nampihorohoro ny tranobe sy ny hazo nianjera ary niteraka horohorontany mafy tany El Salvador mpifanila vodirindrina aminy.
Tsy nisy ny tatitra avy hatrany momba ny fahafatesan'ilay horohoron-tany, izay nolazain'ny US Geological Survey nisoratra tamin'ny 6.8 tanjaka ary namely 38km atsimo andrefan'ny Puerto San Jose tamin'ny halalin'ny 46.8km.
Horohoron-tany lalina kokoa nitovy habe tamin'io koa no namely ny afovoan'i Goatemalà tamin'ny herinandro lasa, nahafaty olona roa farafahakeliny ary tranobe manimba. Nilaza ny sampan-draharaha maika any Goatemala fa nanombatombana ny vokany izy ireo.
Qatar Airways: fotoana fampiasam-bola matanjaka ao amin'ny American Airlines
Fraport dia manomboka ny tetik'asa fanomanana asa ORAT ho an'ny terminal mpandeha vaovao sy ny fotodrafitrasa hafa any Bahrain